Vaovao - Ahoana ny fomba handrindrana ny fihazonana sy ny fonony?
Ahoana ny fomba handrindrana ny clutch sy ny throttle?
Ahoana ny fiaraha-miasa amin'ny clutch sy throttle?
Voalohany, ny fitaovana dia tokony ho amin'ny toerana tsy miandany. Aorian'ny fanombohana ny fiara, aforeto hatramin'ny farany ny klika, avy eo apetraho amin'ny toeran'ny fitaovam-piadiana voalohany ny fitaovana. Vahao ilay izy avy eo. Rehefa mamaha ny fametahana dia miadana. Rehefa tsapanao fa mihozongozona kely ny fiara ary rehefa manomboka mandroso dia aleo mandrehitra solika tsimoramora ary miaraka amin'izay dia tohizo ny famoahana azy mandra-pivoakany tanteraka ary manomboka milamina tsara ny fiara. miovaova
Rehefa mila mitafy fitaovana avo isika dia mila mampifanaraka ny hafainganan'ny kitapo kendrena, avy eo mila manampy valizy mba hahatratra ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana kendrena (ohatra, rehefa eo amin'ny fitaovana 5 ny fitaovana, ny hafainganana dia tsy maintsy hahatratra 50 metatra na mihoatra). Raha vantany vao tafakatra isika dia afaka manitsaka ny puce, mametraka ny fitaovana ary avy eo mamoaka ny clutch koa (azo ampitomboina ny hafainganana), ary miaraka amin'izay dia mitazona ny hafainganam-pandeha hatrany ny hafainganam-pandeha.
Ahoana ny fiaraha-miasa amin'ny clutch sy ny throttle rehefa mihasimba sy miova?
Rehefa mila midina ambany ianao dia tsy maintsy ampidininao aloha ny hafainganana. Izahay dia manitsaka voalohany ny frein mba hiadana, hamorona ny accelerator amin'ny tongotra havanana, hampiakatra ny tongotra havanana, hanitsaka haingana ilay pedal clutch ary hampiova ny vatan-kazo ho an'ireo fitaovana mifandraika amin'izany. , Afaho ny pedal clutch, ary rehefa mamoaka ilay pedal clutch ianao dia atsaharo tsikelikely amin'ny tongotrao ankavanana ilay mpandefa.
1. Ny antony mahatonga ny lelafo voalohany dia ny fiakarana haingana ny clutch.
Rehefa foana ny 1 ka hatramin'ny 2 dia tsy ho faty io rehefa manainga azy ianao, ary manomboka mikatona aorian'ny 2 ka hatramin'ny 3, noho izany dia tsy maintsy alaininao miadana be izy rehefa 2.
Rehefa miakatra ho 2 dia ampitomboina kely ny throttle amin'ny alàlan'ny fomba hampihenana ny isan'ny trano fivarotana, (tsy mampisy solika rehefa mampiakatra ny clutch) dia tsy misy vokany. Fiandohana ara-dalàna izany.
2. Ny herin'ny fitaovana faharoa dia afaka mananika ny arabe an-tendrombohitra, ary ny hafainganam-pandeha dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny antsasaky ny famindrana ny fehikibo amin'ny vilia faharoa. (Raha misy hafainganam-pandeha haingana mihodina U). Raha haingana na miadana ny hafainganam-pandeha U, ampiasao fitaovana 1 hifehezana azy.
3. Mety ny hafainganana ary tsy hijanona ny fiara. Mba hampihenana, hampihenjana ny fihazonana azy, ary hanafainganana, hampitombo ny mpanafaingana. Amin'ny tarehin-javatra ara-dalàna, ny familiana dia fehezin'ny girara 2.